I-Canada DJ Deadmau 5 Ijoyina ii-Beats 1 | IPhone iindaba
I-Canada DJ Deadmau 5 Ijoyina ii-Beats 1
UJoel Thomas Zimmerman, owaziwayo ngegama lesigaba sakhe nguD Deadmau 5, ungumvelisi womculo wase-Canada eletrohouse kunye no-DJ. I-Deadmau5 ivelisa iintlobo ezahlukeneyo zeentlobo ngaphakathi kwendlu yendlu kunye nezinye iintlobo zomculo we-elektroniki.
I-deadmau 5 iya kubonisa inkqubo Imiboniso yeMau5trap eziza kuqala ukusasaza lo Lwesihlanu uzayo ngentsimbi yesi-3 emva kwemini ixesha lePasifiki. Eli ayisosihlandlo sokuqala ukuba lo DJ asebenze no-Apple okoko wayeyinxalenye yamagcisa noo-DJ ababedlala kumnyhadala we-iTunes ngo-2014. kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo.
Ngokuqinisekileyo uvile nge-albhamu entsha ye-Kanye West, icwecwe elitsha elinokuviwa kuphela kwiTidal, inkonzo yokusasaza umculo kuhle yomculo abayithathela ingqalelo iinkonzo zokusasaza kunye neenkampani ezirekhodayo ziyeba. I-West ibanga ukuba i-albhamu yakhe entsha ayinakuze ibekho kwelinye iqonga ukunyanzelisa uninzi lwabalandeli bakhe ukuvula iakhawunti kuTidal. Kodwa abalandeli bavakalise ukungonwabi kwabo kwesi sigqibo sikaSolomon kwaye ngokukhawuleza icwecwe lakhe laba lelona likhutshelweyo kwiPirate Bay.
I-West yakhawuleza yabhengeza ukuba ayisazukukhupha zirekhodi, kodwa endaweni yoko inokuviwa kuphela kuTidal... into efana nokufaka iingcango ebaleni. Kwiintsuku kamva, wapapasha kuTwitter, ezona ndlela zakhe ziphambili zonxibelelwano zokuziveza kwaye kwangaxeshanye enze impikiswano, ifoto apho wabona khona ukuba wayemamele njani umculo kumhlobo wakhe kwenye yeetab, ngelixa ezinye iithebhu sinokubona ngokucacileyo ukuba wayewenze njani uphando kwiPirate Bay ekhangela isoftware evela kwinkampani eyasekwa ngokudibana ne-deadmau5.
U-Deadmau5 uphendule ngokukhawuleza kwi-tweet esithi ukuba akanamali yaneleyo yokusebenzisa i-189 yeedola ezithi iindleko zesicelo. I-West, inyani kumlinganiswa, ngokukhawuleza waqhawula ukuba yintoni i-deadmau5 ekufuneka ayenzile kukuzinikezela ekukhuthazeni uTidal uyeke ukukhalaza ngobuqhetseba. Njengokuba isitsho intetho, Shumayela u-Anton ukuba ndi… kwintshumayelo yakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » I-Canada DJ Deadmau 5 Ijoyina ii-Beats 1
Uvandlakanyo lwamva nje lweQuattro
Uyenza njani i-flash blink kwi-iPhone xa benditsalela umnxeba